သင့်ရဲ့လက်ရှိအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာ ၁မိနစ်အတွင်းသိချင်ရင် - Myanmar in Singapore
Posted by KaeKae0 on October 1, 2010 at 9:14pm
သင့်ရဲ့လက်ရှိအသက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာ ၁မိနစ်အတွင်းသိချင်ရင် ဒီသင်္ချာနည်းလမ်းလေးနဲ့တွက်ကြည့်ရအောင်-အပျင်းပြေ ကစားနည်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပြီး အံ့သြလောက်စရာ မှန်ကန်နေတာ တွေ့ ရပါလိမ့်မယ်။ကဲ ပြောနေကြာတယ်- ခုပဲ try ကြည့်နော်(၁) ပထမဦးဆုံး (ဝ,၁,၂,၃,၄,၅,၆,၇,၈,၉) ထဲက ကြိုက်နှစ်သက်ရာ ဂဏန်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါ။(၂) ရွေးထားတဲ့ ဂဏန်းကို ၂ နဲ့ မြှောက်ပါ။(၃) ရတဲ့အဖြေကို ၅ ပေါင်းပါ။(၄) ရတဲ့အဖြေကို ၅၀ နဲ့ထပ်မြှောက်ပါ။(၅) ရတဲ့အဖြေကို ၁၇၆ဝ ထည့်ပေါင်းပါ။(၆) နောက်ဆုံး ရလာတဲ့အဖြေကို ကိုယ့်မွေးနှစ်သက္ကရာဇ်ထဲက နုတ်ပါ။နောက်ဆုံးသင်ရတဲ့ကိန်းက ရာဂဏန်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ ရာဂဏန်းထဲက ပထမကိန်းဟာ စစချင်းသင်ရွေးခဲ့တဲ့ ကိန်းဖြစ်ပြီး ကျန်ကိန်းနှစ်လုံးက သင့်လက်ရှိအသက်ဖြစ်ပါတယ်။မှန်လား?
မှန်တယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ခုခုရေးပေးသွားပါအုန်းနော် သယ်ရင်း။မူရင်းမျှဝေထားသူ အစ်မနိုင်းနိုင်းစနေနဲ့ ဒီနေရာလေးမှာ တစ်ခုခုမှတ်တမ်းတင်သွားကြသူများအားလုံးအား အထူးကျေးဇူးတင်လျှက်။ခင်မင်လေးစားမှုများစွာဖြင့်-ကဲကဲ0 Views: 2770
Comment by su nge on March 7, 2012 at 3:57pm ကျွန်တော့facebookမှာတင်ချင်လို့ ရှယ်မယ်နော်
Comment by မိုးမုန်တိုင်း on September 9, 2011 at 10:56am amazing
amazing Comment by Regal Dove on July 24, 2011 at 5:01am မှန်ပါတယ်ဗျာ..... ကျနော့် wall ပေါ်မှာတင်ချင်လို့share သွားတယ်နော် thank :) Comment by noelphotoshop on January 23, 2011 at 7:45pm Thanks Comment by salaidavidlin on December 21, 2010 at 3:03am absolutely Comment by tuntun on December 20, 2010 at 11:02pm wow.... thumb up Comment by tuntun on December 20, 2010 at 11:01pm wow.... how's amazing....thumb up.. Comment by ကျော်မိုး on December 17, 2010 at 2:31pm ကြိုတ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေကို ဖြန့်ဝေလိုက်တယ်နော် ။ခွင့်ပြုပေးပါ။ Comment by honey on December 16, 2010 at 4:25pm correct
Comment by ကျော်မိုး on December 16, 2010 at 3:31pm ကိုယ့်အသက်ကိုတွက်ရတာ လက်ရောခြေရော ကုန်အောင်တွက်နေရတယ် ...
အခုတော့ ဟဲ မမောရတော့ဘူး (တော်ပါပေတယ် ဂုလုကြီး) ‹ Previous